Kooxo hubeysan ayaa labo qof oo Isra’iilitiin ah ku dilay duleedka magaalada Hebron ee dhulka la heysto ee Falastiin. – STAR FM SOMALIA
Kooxo hubeysan ayaa labo qof oo Isra’iilitiin ah ku dilay duleedka magaalada Hebron ee dhulka la heysto ee Falastiin.
Isra’iiliyiinta la dilay ayaa rasaas lagu furay iyagoo gaarigooda saaran. Waxaana la sheegay in kooxda weerarka geysatay ay baxsadeen.
Weerarkan ayaa kusoo beegmay maalin kadib markii ay ciidamada Isra’iil galeen isbitaal ku yaal Hebron oo lagu magacaabo Al Ahli, halkaasi oo ay kala baxeen nin Falastiini ah oo dhaawac ahaa, waxay ciidamadaasi sidoo kale dileen nin kale oo ay ilmo adeer ahaayeen ninka afduubteen.
Magaalada Hebron oo kamid ah dhulka Isra’iil ay xooga ku qabsatay ayaa kamid ah goobaha ugu xiisada badan dhulka Falastiin, magaaladaasi ayey degen yihiin Isra’iiliyiinta xagjirka ah oo xoog kula wareegay qeybo badan oo kamid ah bartamaha Hebron, kooxdaasi tirada yar ee Yuhuuda Xagjirka ah ayaa keentay in magaalada labo loo kala qeybiyo isla markaana waxaa illaalo xoogan ka haya ciidamada Isra’iil oo cadaadis weyn oo dhanka dhaq dhaqaaqa ah ku haya shacabka reer Falastiin.
Ururka Daacish, ayaa sheegtay weeraradii xalay gil gilay Magaalada Paris
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa xaalad deg deg ah kaga dhawaaqay dalkiisa